Admin on Sun Jun 12, 2011 4:33 am
soft ware နဲ့ သုံးတဲ့နည်းတွေ သူများ stick ထဲက data တွေကိုခိုးယူမယ် Program ရေးနည်းတွေပါတယ်ဘာမှမဟုပ်တဲ့ ရှေ့လူသုံးသွားတဲ့
password ကြည်တဲ့ software တွေပါသေးတယ် ထားလိုက်ပါတော့နောက် password ခိုးယူမဲ့နည်းတွေမတင်တော့ဘူး..
gmail နဲ့ပက်သက်ပြီးတော့ပြောကြတာပေါ့ gmail password hacking လုပ်နိုင်တဲ့နည်းတွေအများကြီးရှိပါတယ် သမန်လူတောင်သုံးနိုင်
တဲ့ key logger တို့ golden eye တို့ pusinifish တို့ ကျွန်တော်တင်ပေးဖူးတဲ့ gmail page အတုလုပ်တာတို့ potable သုံးနိုင်တဲ့ software ရှေကလူသုံးသွားတဲ့ password ကိုကြည့်တာတို့ ကို့ဘာကို note pat မှာ ရေးသားပြီးထောင်ချောက်ဆင်ပြီး gmail password
တွေမှတ်တဲ့ program တွေ လူတစ်ယောက်ဟာအခြားလူးတစ်ယောက်နဲ့ chat နေတုံးမှာသူကို hacking လုပ်နိုင်တဲ့နည်း ၃၀ ကျော်လောက်
Passwords များသည် ကွန်ယက်များ၏ လုံခြုံရေးအတွက် ကာကွယ်နိုင်သည့် အမြင့်မားဆုံးသော သော့ချက်ဖြစ်ပါသည်။ မည်သည့် စနစ်တွင်မဆို စည်းကမ်း နည်းလမ်းအတိုင်း ညီညွှတ်သော Password နှင့် User Account ရယူထားနိုင်ပါသည်။ User Account များသည် ကန့်သတ်/ သတ်မှတ်ထားသော ခွင့်ပြုချက်များဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော်လည်း လုံခြုံရေးအရ ကျိုိးပေါက်မှုများ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
Hacker များသည် Network များအတွင်းဝင်ရောက်ရန် တစိတ်တပိုင်းကြိုးပမ်းမှုမှာ အစဉ်ရှိနေကြောင်း သတိရှိနေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ထိုကြောင့် မိမိတို့သုံးစွဲသော Passwords များကို မသက်ဆိုင်သူများ မသိရှိစေရန် ကာကွယ်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။ Passwords များကို Administrator မှ ဝေငှရာတွင်လည်း တယ်လီဖုန်းပေါ်မှ မည်သည့်အခါတွင်မှ မပေးရပေ။ User မှ Password ပျောက်ဆုံးလျှင်သော် လည်းကောင်း၊ မေ့လျော့ခဲ့လျှင် လည်းကောင်း Administrator မှ Letters နှင့် Numbers များ ရှုတ်ထွေး ရောနှောပါဝင်သည့် Password အသစ်ကို ပြန်လည် သတ်မှတ်ပေးရမည်ဖြစ်ပြီး User မှ ပြောင်းလဲ ပေးသော Password အသစ်ဖြင့် ဝင်ရောက်ရသည်။ Stronger Network Operating System များတွင် ယင်းကဲ့သို့သော စွမ်းဆောင်ရည်များ ပါဝင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် Windows 2000 server ၌ User တည်ဆောက်ရာတွင် ရှိသော User must change password at next logon Setting ဖြစ်ပါသည်။
သုံးစွဲသူများ တည်ဆောက်ရာတွင် ကောင်းမွန်သော Password များကို ရွေးချယ်ပေးရမည်။ ဇနီး၊ လင်ယောင်္ကျား နှင့် မိမိ၏ အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန် အမည်များ၊ မွေးနေ့ရက်စွဲများ စသည်တို့ကို အသုံးမပြုသင့်ပေ။ Password များအား အနည်းဆုံး Characters6လုံးနှင့်အထက် Letters၊ Numbers နှင့် Punctuation Symbols များ ရှုတ်ထွေး ရောနှောပါဝင်သော String Passwords များကို သုံးစွဲရမည်ဖြစ်သည်။ ယင်းသို့ Password သုံးစွဲခြင်းကြောင့် စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အခက်အခဲ များလည်း အမြဲတစေ ရင်ဆိုင်နေရမည် ဖြစ်သည်။ ပထမတစ်ချက်မှာ သုံးစွဲသူမှာ မိမိ Password အားမေ့လျော့ခြင်း၊ မိမိ User Name Password ဖြင့် အခြားသူမှ ဝင်ရောက်ခြင်းကြောင့် သူတို့၏ Password များအား မကြာခဏ ပြင်ဆင် ပေးနေရခြင်းနှင့် ဒုတိယတစ်ချက်မှာ Password အား မပျောက်ဆုံးရအောင် Write Down လုပ်ထားခြင်းဖြင့် အလွယ်တကူ ရရှိပြီး Network ကျိုးပေါက်ခြင်းများ ဖြစ်ပါသည်။
Biometrics မှာ Finger Print ၊ Retinas ၊ User’s Voice များကို Scan လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ယင်းကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်ပါက အလွန်အမင်း လုံခြုံမှု ကောင်းမွန်လာသော်လည်း ကုန်ကျစရိတ်မှာ များစွာ မြင့်တက် လာမည် ဖြစ်ပါသည်။
ယနေ့ခေတ်အတွက် အင်တာနက်ဆိုတာ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် ဆက်သွယ်မှု့အပိုင်းမှာ အဓိကကျသော အပိုင်း၊ အခန်းကဏ္ဍကနေ ပါဝင် နေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တိုးတက်လာတဲ့ နည်းပညာ အလျှောက် အင်တာနက် နဲ့ အီးမေးလ် အသုံးပြုသူတိုင်း မိမိတို့ အသုံးပြုသော နည်းပညာ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို သိထား သင့်ပေသည်။ ကျွန်တော်တို့က အီးမေလ်း လိပ်စာလေး တခုရိုက်ထည့်ပြီး ပို့လိုက်တယ်.. ဒါပေမဲ့ အဲ့လိုပို့လိုက်တဲ့ မေးလ်ဟာ လူသန်းပေါင်းများစွာ သုံးနေသော အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဖြတ်သန်းသွားလာနေကြတယ်။ ဒီလိုနေရာမှာ ကြားခံ Gateway, Server, Backbone, Segment တွေကိုဖြတ်သွားရတယ်။ ဒီအတွက် မိမိတို့သုံးနေတဲ့ မေးလ်တွေကို ကြားခံနေရာကနေ ၀င်ရောက် ဖောက်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်တယ်။
E mail အားအကြမ်းဖက်ခြင်း
ISP ဆိုတာ မိမိတို့သုံးနေတဲ့ Network Traffic တွေအားလုံးကို အလွယ်တကွယ်စောင့် ဖမ်းနိုင်တဲ့နေရာပါ။ ကျွန်တော်တို့သုံးနေ network packet တွေဟာ ISP မှာတော့ Feed တစ်ခုထားခဲ့ရတာပဲ။ ဒီအတွက် မိမိတို့ရဲ့ မေးလ်အားလုံးကို ISP ဟာ လိုအပ်ရင်လိုအပ်သလို ၀င်ရောက် ကြည့်လို့ရတယ်။
မိမိအသုံးပြုနေသော မေးတွေအားလုံးကို အသုံးပြုနေသော မေးလ် provider တွေကနေ ၀င်ကြည့်လို့ရတယ်။ ဥပမာ - Gmail သုံးတယ်ဆိုရင်.. Gmail ရဲ့ Authorized person တွေက ကြည့်လို့ရတယ်။
တစ်ချို့လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီ တွေက မိမိတို့ရဲ့ လုပ်ငန်းအတွင်း Data Document တွေ အမှားအယွင်းနဲ့ ၀န်းထမ်းတွေကိုစောင့်ကြည့်ရန် packet sniffer တွေကို Internal Network တစ်ခုလုံအတွက် ထားထားကြတယ်။
အကယ်၍ မိမိရဲ့ အိမ်နားဝန်းကျင်မှာ သုံးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ရဲ့ Network နဲ့ Mail ကို interception လုပ်မယ်ဆိုရင် ပုံမှန်အားဖြင့်မလွယ်နိုင်ပေမဲ့ ၄င်း system ကိုဝင်ရောက်ဖို့ special hardware အနည်းငယ်တော့လိုတယ်။ ဒီလိုနေရာတွေမှာလည်း ၀င်ရောက်နိုင်တယ်။
Wireless Network ဆိုရင် များသောအား Wi-Fi ကိုပဲပြေးမြင်လိမ့်မယ်.. ဟုတ်ပါတယ်. ဒီလို Wi-Fi Wireless AP တွေကလည်း Interception လုပ်လို့ရတယ်။ ၄င်း Wireless တွင်၊ Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth, GPRS, HSDPA စည်တို့လည်းပါဝယ်တယ်။
ဒီတော့ မိမိတို့ရဲ့ မေးလ်တွေကို ဘယ်သူမှ မ၀င်ဖတ်နိုင်အောင် လုပ်ဆောင်တဲ့ နည်းမရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ တစ်ခုတည်းသော နည်းလမ်းကတော့ မိမိပုိ့လိုက်သော messages တွေကို Encrypt လုပ်ပြီးပို့ကာ ကြာဝင်ဖောက်ကြည့်လို့မရအောင် လုပ်ဆောင်ခြင်းသာ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်တယ်။
Internet café ဆိုင်တွေမှာ သုံးသူများ အတွက် (သို့) သူများ PC မှာ သုံးတဲ့သူတွေ အတွက်ပါ။ သူများ ပတ်စ်ဝေါ့ယူမယ်၊ Gmail password hack မယ်ဆိုရင် connection ကျအောင်လုပ် gtalk က password တွေ အဖြစ်ပေါ်လာရင် သူတို့ပြောတဲ့ Software နဲ့ ကြည့်ပေါ့ဗျာ။ အင်း ... အဲဒီထက် ကောင်းတဲ့ နည်းရှိတယ်ဗျ ... see password လို့ ခေါ်တယ်။ သူ့ပရိုဂရမ်က မှန်လို ပုံစံလေးပါတယ်။ password နေရာမှာ မှန်ဘီလူးလို ကြည့်လိုက်ရင် ပေါ်ပြီပဲ။ portable လည်း ရှိပါတယ်။ ကဲ... ဆက်လေ့လာရအောင်....
အဲဒါထက်ဆိုးတာ တခုရှိတယ်ဗျ။ ဒီလိုဗျာ .. keylogger လို့ခေါ်တယ် .. Window စတက် ကတည်းက စအလုပ်လုပ်တယ်။ ပိတ်လိုက်လည်း နောက်ကွယ်မှာ လုပ်နေတယ်။ tray icon လည်း မပေါ်ဘူး။ ရှိမရှိ မသိရဘူးပေါ့ဗျာ။ သူက ခင်ဗျား keyboard မှာ ရေးလိုက်သမျှ၊ mouse နဲ့နှိပ်သမျှတွေကို အချိန်နဲ့တကွ မှတ်ထားပေးတယ်ဗျ။ အဲဒါဆို ဘာတွေ ပါသွားမလဲ တွေးကြည့်လေ။ ပထမဆုံး gtalk sign in ၀င်မယ်ဗျာ။ သွားပြီ user name ရော ၊ password ရော။ နောက်ပြီးရင် ကိုယ့်ချစ်သူနဲ့ နှစ်ကိုယ်ကြားတွေ ပြောမယ်၊ ဒါမှမဟုတ် လုပ်ငန်းပိုင်းတွေ ပြောမယ်။ တချို့တွေ credit card နံပါတ်တွေ ရိုက်မယ် အကုန်ကျန်ခဲ့တာဗျ။ ဘယ်လောက် ဆိုးသွားနိုင်မလဲ တွေးကြည့်ပေါ့။ အထူးသဖြင့် ဆိုင်ဘာကနေ သုံးရတဲ့လူတွေ။ တွေးသာကြည့်ပါတော့ဗျာ ... (All in 1 key-logger ဆိုရင် ဓါတ်ပုံတွေ၊ အသံတွေ၊ ဗီဒီယိုတွေကိုပါ မှတ်ပေးထားနိုင်တယ်၊ သတိထားနော်.. မင်းသား/မင်းသမီးတွေပါ ဖြစ်သွားမယ် ဟ…ဟ…)။
Keylogger ရန်က ဘယ်လိုကာကွယ်ရ မလဲ....။
Password တွေ ပါမသွားအောင် လုပ်မယ်ဆိုရင်။ Ctrl+Shift+Esc (or) Ctrl+Atl+Del နဲ့ Task manager ကို ခေါ်ရပါ့မယ်...။ Process ဆိုတဲ့ tab ကို နှိပ်ပြီး msdts.exe ဆိုတာကို လိုက်ရှာကြည့်ဗျာ။ ရှိတယ်ဆို keylogger သုံးထားလို့ပေါ့ ။ အမြန်သာ click နှိပ်ပြီး End process ပေးလိုက်ပေတော့ ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ keylogger ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကတော့ task manager မှာရှိတဲ့ process tab ထဲမှာ ရှိနေတဲ့ကောင်တွေထဲက ကိုယ်သုံးမယ့် gtalk လောက်ပဲ အိုကေထားပြီး ကျန်တာတွေကို disable သို့မဟုတ် end process ပေးလိုက်တာပါပဲ... ဘာလို့ဆို ရိုးရိုးယူဆာတွေအနေနဲ့က ဘယ်လိုဖိုင်လ်က အချက်အလက်တွေကို ရီကော့ လုပ်တာလဲဆိုတာ မသိနိုင်တော့ အန္တရာယ်ကင်း ဘေးရှင်းအားလုံးကို end process လုပ်ပြီး ကိုယ်သုံးတဲ့ ကောင်ကိုပဲ manually ခေါ်သုံးတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။